Flat Laminate Floor Maka N'ogbe na usoro nrụpụta nkịtị na onye nrụpụta na ndị na -ebubata ya Moyo
Nha: 1218x240mm, 1218x198mm
Ọkpụrụkpụ: 7mm 8mm 10mm 10.5mm 12mm
Mpụta Osisi ọka Embossed
Klas Abrasion - ac1/ac2/ac3/ac4
Ụdị Ụdị Hdf
Njirimara ngwaahịa: Wide plank
Nwụnye: Pịa ọnụ - Ejikọtara n'okpuru ya
Akwụkwọ ikike azụmahịa: Ìhè Afọ 3
Akwụkwọ ikike obibi: Afọ 20
Tsca Mbụ Vi Dabara
Ca Nkebi 01350 Dabara
Greenguard Gold gbara akwụkwọ
Tinyegharịa usoro: 12 jiri ntụgharị osisi
Ala laminate bụ ihe mejupụtara ala. Ọ mejupụtara ọtụtụ ọkwa, ọ nọla ihe dị ka afọ 50, ma emebere ya ka ọ gbakwunye ụdị na ọnụ ahịa n'ụlọ gị mgbe ị na -egbochi iyi na akwa. Ọtụtụ mgbe, a na -eme ya ka ọ dị ka osisi (mana ọ bụghị oge niile).
Mana nke ahụ bụ naanị ọnụ ọnụ mmiri. N'ụbọchị ndị a, e nwere ụdị ala dị laminate dị iche iche - nke ọ bụla nwere uru na ọghọm nke ya. Ma ọ bụ ezie na a na-ehichapụkarị ya n'ihi ọnụ ahịa dị ọnụ ala na ọdịdị mbụ ya (xoxo 1980s), ala laminate abatala n'onwe ya dị ka ihe siri ike, mara mma, akụ na ụba, yana obere ndozi ụlọ.
N'okpuru, anyị ga -enye gị 411 n'ihe niile laminate. Anyị ga -ekwu maka ihe eji eme laminate, ọnụ ahịa laminate, ịdịte aka ya, ebe ị nwere ike iwunye ya, otu esi etinye ya, yana ụfọdụ uru na ọghọm.
Kedu ihe a na -eme na laminate nke ?
N'ikwu okwu n'ozuzu, ala laminate nwere akwa atọ. Site na ala, ha bụ:
Nnukwu okpokoro ma ọ bụ okpokoro isi nke plywood ma ọ bụ fiberboard dị elu iji nye ike na nkwụsi ike. Ntọala a bụ otu nke ejiri n'ọtụtụ ngwaahịa ụlọ nrụpụta osisi kacha mma.
Igwe onyonyo dị elu, nke nwere foto. Ọzọkwa, onyonyo onyonyo a na-adịkarị ka osisi-mana ị nwere ike ịhụ ụdị okwute na ọbụna ụdịdị igwe.
A na -eyi akwa mkpuchi iji nye ike na nchedo. Okpokoro a siri ike nke ukwuu, na -eme laminate otu n'ime nhọrọ ụlọ na -adịgide adịgide gburugburu.
Ebee ka ị nwere ike ịwụnye laminate flooring?
Laminate dị mma maka paseeji, ọnụ ụzọ mbata, ụlọ iri nri, na ime ụlọ (n'ihi na akwa mkpuchi ya na-adịte aka pụtara na ọ nwere ike iguzogide okporo ụzọ ụkwụ siri ike na ọnya). Mana ọmarịcha ihe onyonyo ya na -emekwa ka ọ dabara nke ọma maka ụlọ ihi ụra, ụlọ ezinaụlọ, na ọbụna kichin n'ọnọdụ ụfọdụ.
Nke gara aga: ala laminate maka agba parquet
Osote: Kpọrọ nkụ azụ